ဂေဇက်ရွာစောင့်နတ်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂေဇက်ရွာစောင့်နတ်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
- ရွာ စောင့်နတ်
Posted by ရွာ စောင့်နတ် on Mar 30, 2012 in Creative Writing | 82 comments
ကျွန်ုပ်သည်ကား ဤရွာကြီးကို စောင့်ကြပ်သော ရွာစောင့်နတ်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်……. ကျွန်ုပ်သည် ရွာအတွင်း ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများ….. မသမာမှုပြုသူများ……..မတရားသည်များကို လက်ပိုက်ကြည့်နေမည်မဟုတ်………. အဟီး နည်းနည်းများသွားပီထင်ပါ့………….. ရွာအတွင်းမှ ရွာသူ/ရွာသားများအားလုံး မည်သူ ဘာလုပ်သည်ကို အားလုံး သိမြင်နေသူပင် ဖြစ်ပေတော့သည်………… ရွာအတွင်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါလျှင်လည်း… ကျွန်ုပ်တည်ရှိရာ ရွာဦးထိပ်ရှိ နတ်ကွန်းတွင် လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပေသည်တကား……… ဤရွာမှ ရွာသူကြီး မိန်းမ မီးဖွားစဉ်အခါကလည်း ကျွန်ုပ်ကူညီခဲ့ဘူးပေသည်………… ကဲကဲ ဒီလောက်ဆိုလျှင် အသင် ရွာသူ/ရွာသားအပေါင်းတို့အား မိတ်ဆက်ခြင်း ပြီးဆုံးလေပြီတကား………………………
About ရွာ စောင့်နတ်
ရွာ စောင့်နတ် has written 1 post in this Website..
View all posts by ရွာ စောင့်နတ် →
စောစောကပဲ ထက်ထက်မိုးဦး နဲ့ တွေ့လာတာ..
ရွာထဲမှာ ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ခဲ့ရင် မတရားမှု အတွက် ရွာစောင့်နတ် ကို အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ ၁ထောင်တန် ငွေစက္ကူ တအုပ် လက်ဝယ် ရှိပါကြောင်း လာပြောသွားပါတယ်။
သမီးတော် ဆူး ရွာစောင့်နတ်ကို ပေးဆောင်ဖို့ ၁ ထောင်တန်ငွေစက္ကူတစ်အုပ်ကို ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လှူလိုက်ပါကွယ်……………ဒါဗြဲ
ရွာ စောင့်နတ် says:
ဒီကလေးတော်တော်ခက်တာပဲ ရွာစောင့်နတ် ပိုက်ဆံကို ဖြတ်စားလက်စား လုပ်ချင်တာပဲ……. ဒီမယ် သူရဇော် သင် အပါယ်ငရဲလားမှာ မကြောက်လေဘူးလား၊ လောလောဆယ် သင့်အား သူကြီးအပြစ်ပေးစေရန် ကျွန်ုပ် စွမ်းဆောင်ပေတော့မယ် – – – –
အွန် ရွာစောင့်နတ်ကြီးရယ် ရွာထဲက မိတိုက် ဘယ်သူနဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဝှာဖြစ်တယ် မသိဘူး
ဇီးကပ်နေတယ်……… အဲဒါလေး သိရင် ဖြေပေးပါဦး ရွာစောင့်နတ်ကြီးရယ်
ရွာထဲက မိတိုက်က လေလာရာ ဖင်ပေးပြီး ဇီးကပ်တာဖြစ်ပါတယ် အသင် သူရဇော်
အလိုတယ် ဟုတ်တဲ့ ရွာစောင့်နတ်ကြီးပါလား။ သူကြီးမိန်းမ တောင်မီးဖွားပေး တာတောင်ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာ။ သူလဲ ယောင်္ကျားအိုဂျီထင်ပါ့တော်။ တို့ရွာထဲက အပျိုကြီးတွေ နဲ့ အတွဲမရသေးတဲ့ လူပျို ကြီးတွေ ကို မလိုက်စမ်းပါအေ။ ပြီးတော့ အလှူလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အလှူငွေများများရအောင်ဆော်သြစမ်းပါ။ ဒါပဲ ကူညီ။ ဒါဗြဲ။
ကျွန်ုပ်လူ့ဘ၀ဒုန်းက အိုဂျီဖြစ်ပေသည်…..ယခု နတ်ဘ၀တွင်တော့ အိုဂျီမလုပ်တော့….. ဒါပေတည့် ဤရွာ၏သူကြီးဖြစ်သဖြင့် စောင်မ ကြည့်ရှု မတော်တရော်မြင်ရခြင်းပင်…. ရွာထဲက လူပြိုဂျီး/အပြိုဂျီးများကိုလဲ စောင်မကြည့်ရှုရပေဦးမည်…….၊ ။.။။။။။ အလှူလုပ်ဖို့ရှိတာလဲ ရွာစောင့်နတ်သိပြီးဖြစ်သည်။။။။။။။။ အလှူငွေများများရစေခြင်းအလို့ငှာ နတ်ကွန်းသို့ လာရောက်၍ ကြက်ကြော် (KFC-မှစားတာနော်)နှင့် အရက်တော် (Blue lable ကလွဲ၍မသောက်ပါ) တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်………….
ပုံ/ ရွာကိုစောင့်ကြပ် ရွာစောင့်နတ်
ဟိုဘက်ရွာက ကြက်နာကြလို့ အောက်ကြေးနဲ့ လာရောင်းလို့ ဝယ်ကြော်ထားတာနဲ့ 
ကျုပ်တို့ ရွာထိပ်က ချက်အောင်ပု ရဲ့ မီးတောက် တစ်ပုလင်း နဲ့ ဘဲ ရှိတယ် ။
အဲဒါလေးကိုဘဲ ကြိတ်မှိတ် သုံးဆောင်တော်မူပါနော် ။
၀င်းတော်ကာကြီးရေ ကျုပ်လို နတ်ကို ကြက်နာနဲ့ မီးတောက်တဲ့၊ ရင်နာလွန်းလို့ပါ၊ ကျုပ်ကဖြင့် စောင်မကြည့်ရှုလိုက်ရတာ ဖက်ဖက်ကိုမောလို့၊ အိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ချဉ်ချဉ်တူးတူး မူးပြီးရောကွာ
ဒီကနေ့ ည ၊ ဘောပွဲတွေမှာ
အထောဘဲ ဖြစ်ရအောင် မစစောင့်မ ပေးလဗျာ ။
စကော့စမ်းရေ နဲ့ ပီကင်းနေမထိဘဲကင်နုနုကြွကြွရွရွလှလှလေးတွေ ဆက်သပမယ်
ရွာသူကြီးမိန်းမ မီးဖွားတုန်းကူညီတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်….။ အင်ဂုလိမာလသုတ်ရွတ်ပေးတာကို ပြောတာလားဟင်…….။
ဟာ … .ဟုတ်ပီ ..
မီလျံဘစ်ဇနက် ဗျို့ …..
ဂျမ္မခန္ဒာမှာ…အင်္ဂုလိမာလ သုတ် အငှားရွတ်တဲ့အလုပ်
လုပ်စားရင် အတော် နေ့တွက်စီမယ် …
ဒီက ဖားသက်ပြင်းပြောတဲ့ မီလျံဘစ်ဇနက်ကြီးကို ရွာစောင့်နတ်စိတ်ဝင်စားသဖြင့် မြင်းဖြူကြီးကို စီးပြီး ဂျမ္မခန္ဒာသို့ အငှားရွတ်ရန် လစ်လေပီ……..
အသစ်ကလေး ဆိုလို့ သတိပေးလိုက်ဦးမယ်..
ရွာထဲမှာ နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် ဆိုတာ ရှိတယ်..
အဲ့ဘဲက ဇိမ်ဖုံးဂျီးပေါက်စ …ဖွန် ရေလည်ကြောင်တယ်…
ရှက်ကီ ရေလည်ပိတ်တယ်…. တော်ကီ ရေလည်ပွားတယ်…
ငရဲတွေ ငအုံတွေလည်း ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး..
နတ် နဂါး သရဲ ဘီလူး အကုန် တွေ့ရင် ရုံသွင်းပြစားမယ်
တမလွန် ဆိုတာကိုလည်း မှန်ပြောင်းလောက်မှတ်တာ…
သဂျီးနဲ့ အဲ့ဘဲ ကို သတိထား …
အမေဒစ်ကင်န် စစ်တပ် ကို ပြစား ခံနေရဦးမယ်…
အဲလယ်လယ် ရွာစောင့်နတ်ကိုများ အမေဒစ်ကန်စစ်တပ်ကိုပြစားမယ်ဒဲ့ ဒီရွာစောင့်နတ်ကလဲ ခေသူမဟုတ်ဘူးဟေ့
တွေ့လား ရွာစောင့်နတ် အဲဒီနှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်ကို နာနာလေးသာစော်တော်ကီးလိုက်ပါ …. ဒင်းက ဘီလူးကို ရုံသွင်းပြစားမယ်တဲ့ …. ရွာထဲမှာအဲသလိုရမ်းကားနေတာပါချင့် ….
ဟင် …. ဒါ ဘူလေးလဲ ဘူလေးလဲ အတစ်ကလေးဆိုတော့ အပြစ်လေးမမြင်ပဲ ချစ်သွေးဝင်အောင် နယူးကလီးယားလေးလုပ်လိုက်ဦးမှ နတ်ဆိုတော့ အထီးပဲဖြစ်မယ် …. ခစ်ခစ်
သမော်ဒီး.. အိပ်မက် ထည့်မက်လိုက်..
ဘူလေးလဲဆိုတော့ ရွာစောင့်နတ်ပါ၊ သမော်တီးကို ဂျော်ဒကီးတွေနဲ့ ပေးစားမယ်၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ နတ်ဖြစ်နေသဖြင့် ချမ်းသာပေးပါကွယ်…………ခစ်ခစ်….နျူးကလီးယားသံဖြင့် ရယ်သည်……… ပုံ/ရွာစောင့်နတ်
အို နတ်ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲ သူများတွေကလေးလိုချင်တာရွာစောင့်နတ်ဆီမှာတောင်လာတောင်း သေးတာပဲ မီးနဲ့ ရွာစောင့်နတ်နဲ့သာဆို အဟိ ဘယ်သူ့အကူအညီမှမလိုတော့ဘူး ….
ဟေ နတ်မျိုးနတ်နွယ်လိုချင်တယ် ထင်ပါ့
မနက်ကတော့ ကိုဖက်ကပ် ပြောသား သရဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားသူမြင်ဖူးလားတဲ့။ အခုတော့ အပြွတ်တယောက် ခင်မျာ နတ်ကို အီစီကလီလုပ်နေပြီ။ ဟင်းနော်။ ငါ ဟို နီနီခင်ဇော်ရဲ့သီချင်းဆိုလိုက်မယ် ‘မင်းနဲ့ငါနဲ့လုံးဝ ရန်သူ အပေါင်း သင်းတွေနဲ့ …………….”
အထက်လူကြီးနှင့်ပေါင်းစားကာ ရွာစောင့်နတ်ထံမှ ဘလူးလေဘယ်နှင့်ကြက်ကြော်ကိုအကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စား
တော်မမူခြေပီ အသင်ရွာစောင့်နတ်အကျွန်ုပ်သည်ကား သိကြားမင်း၏အလိုတော်ရိဖြစ်ပေ၏ မာဇတာမာဃ
ရဲ့အလိုတော်အရ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဗယ်လင်တိုင်းတစ်လုံးနှင့် အင်္ဂလန်ဝိုင်ဖြူတစ်လုံးဆက်ဆက်လာ၍ဆက်သ
စေ…… အမြည်းတော်အဖြစ်သူကြီးကျော်ငြာပေးနေသော ၄င်းစပွန်ဆာယူထားသည့် ကိုဘေးနွားကင်ဆိုင်မှ
အမိန့်တော်အရ……နောက်တီးနောက်တောက်ဂိုဏ်းသား …….. ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်
အလို ကျွန်ုပ်တွင် အထက်လူကြီးမရှိ………..မိုက်မဲလှတဲ့ မိုင်ဆွန်ခ!^#@%$$( ရှည်လိုက်တဲ့နာမည်………နတ်စိတ်မရှည်ဘူးးးးးးး အလိုတော်ရိတွေဘာတွေသိဘူး အသင့်အား ကျွန်ုပ်အပြစ်ပေးချေမည်………မိုင်ဆွန်ခ!^#@%$$( သင် ငရဲတို့သနှင်း ငရဲမင်းထံ ပိုက်ဆံသွားချေးစေ………ဒုံးးးးးးးးးးးး
ငရဲပြည်ကိုအကျွန်ုပ်ပိုက်ဆံသွားချေးခိုက် အသင်ရွာစောင့်နတ်အမည်အား သေမင်းမှတ်စုတွင်
ထိပ်ဆုံးတပ်ထားသဖြင့် ငရဲမင်းအားနားပူတိုက်၍ရှေ့နေလိုက်ကာ ပယ်ဖျက်စေခဲ့ချေပြီ
အသင့်ပို့စ်တွင်ကွန်မန်းဖြင့်အကြံပေးခနှင့် ငရဲပြည်တွင်ရှေ့နေလိုက်ခ အကျွန်ုပ်အားပေးရန်ရှိသည့်
အမိန့်တော် ……… ရွာအတိုင်ပင်ခံအကျိုးတော်ဆောင်ကြီး………
ကျွန်ုပ်ဘုန်းရှိ ကံရှိမာမီ ပါရှိပါလျှက်နှင့် အသင်ရွာစောင့်နတ်ပျင်း လာသလော
အမိန့်တော်~~~~အထက်လူကြီး ဘုန်းရှိ ကံရှိမာမီ
ဒီလိုမျိုး နေရာလုနေလို့ ကျွန်ုပ်ရွာစောင့်နတ်ကိုယ်ထင်ပြရခြင်းဖြစ်ပေသည်၊ အသင်တို့ရွာကလေးသာယာစေခြင်းအလို့ငှာ ကျွန်ုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်၊ အသင့်ရဲ့မိုက်မဲမှုအတွက် ရွာသူကြီး ဇီးသီးမောင်းတီးပီး ပြောပြ ပြစ်ပေးလုပ်ခိုင်းရပေဦးမည်.. အသင်ကပြား ဗမာလိုလို တရုပ်လိုလို မရေရာတဲ့ကောင်လေးရေ……..ဒါဗြဲ
အမိန့်တော်~~~~အထက်လူကြီး ဘုန်းရှိ ကံရှိမာမီ ပိုင်…:D
ရွာစောင့်တန်ဆိုတာ အထီးလားအမလား ???
ဓား ဓားဂျင်း ဒုတ် ဒုတ်ဂျင်း မှ ကြိုက်ဒါ
မိုက်ကယ်ဆိုတာ ဂျက်ဆင်နဲ့အမျိုး……….ဂျော်နီဆိုတာ ဂျော်ကာရဲ့တပည့်၊ အောင်ပုဆိုတာ မောင်ဂျပုရဲ့မြေး၊ အသင်ကိုကျွန်ုပ်ပြောတာမှန်လား မှားလား၊ ရွာစောင့်နတ်တော့ နတ်အခြောက်ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါ့၊ မလုပ်ကောင်းပါဘူးကွယ်.အသင့်အား ငရဲခွေးများ စောင့်စားနေလိမ့်မည် ဆင်ခြင်လော့၊ သုံးသပ်လော့၊ ဒါဗြဲ
ဟာ.. အိုဂျီ ကြိုဆိုတယ်ဗျာ….. လာ… ဒီနားနေရာရှိတယ် … ဝင်ထိုင် … ပြော …
ဖြတ်ပိုင်းထဲဘယ်လောက်ရေးလိုက်ရမလဲ … သိတယ်မဟုတ်လား ;)
မောင်မင်း ချာတူးလန် အဘယ်အတွက် အလှူခံသည်ကို ကျွန်ုပ်မမြင်ရပါတကား၊ လက်မှတ်ရောင်းတာများလားကွယ်
ဂျေဒိုးနတ်ကဖြင့် စားလို့ ရသေးတယ်
ရွာစောင့်နတ်က ချားလို့ ရဘူး
အောင်မာ အော်မာ ဘယ်သူများလဲလို့ တွက်ပီတပည့်ကျော်ပေဘဲ……..အသင်လဲ အပြစ်ရှိသူပေတည်း… အသင့်ကိုအပြစ်ပေးဖို့ ညောင်ပင်မှာ ရေးထားတယ် ဒါဗြဲ
ဒီ http://myanmargazette.net/107492/health-fitness/comment-page-1#comment-176398 အတွက် နှင့် ဒီ http://myanmargazette.net/?p=110633 အတွက် ကောက်ခံရဂျင်းဖစ်ပါဒယ်
လေပေါ ပြောတော့ ဒီလို (ကျွန်ုပ်သည်ကား ဤရွာကြီးကို စောင့်ကြပ်သော ရွာစောင့်နတ်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်) လုပ်တော့ ဒီလို (မောင်မင်း ချာတူးလန် အဘယ်အတွက် အလှူခံသည်ကို ကျွန်ုပ်မမြင်ရပါတကား၊ လက်မှတ်ရောင်းတာများလားကွယ်)
ဒီဘက် ခောတ် မှာ မယုံရဆုံး တွေကတော့ …. ရေအားလျှပ်စစ် နဲ့ပက်သက် ရင် သူ့ထက် ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး လို့ပြောတဲ့သူနဲ့ ခေါ်တုန်းက ခေါ်ပြီး ပေ 1500 ကျော်မှာထားတဲ့သူနဲ့ အကုန် သိတယ်ပြောပြီး … ရွာ့အလှူ နဲ့ ချာတူးလန် comment ကို မဆက်စပ် နိုင်တဲ့ ရွာစောင့်နတ် ရယ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်လို့ စတာနော့ …
အမောင် အမ်လုလင် ကျွန်ုပ်နတ်ဖြစ်သည်ကို မေ့လေရော့သလား…… ရွာထဲက အကြောင်း ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိသဗျ… ချာတူးလန်ဟာကို မဆက်စပ်နိုင်ရိုးလား….. ကျုပ်လဲ သနားလို့ ခင်ဗျားကို မကိုင်တာနော်
မီးဖွားတာကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့…မလေးပေါ့နော် မလေး…ဟီးဟီး :D:D
အိမ်း ရွာစောင့်နတ်က အထီးသာလျှင်ပင်ဖြစ်ပေသည်တကား….This Sar Lin သင်လဲ အမိုက်လဲလေပါတကား
နာရိုက်ဒါ .. နာရိုက်ဒါ ..
ဗိုက် .. ဗိုက် …
ဒီလောက် တောင့်တနေတာတောင် ကိုယ်ထင် မပြလို့ကတော့ ..
ဒီရွာစောင့်နတ်ကြီး သေမယ်ဒါမှတ် …
အံစာတုံး အသင်နာချင်းသည် အသင့်ဗိုက်ထဲတွင် ၀က်ပေါက်လေးများရောက်ရှိနေလေပီ…. အဲဒါ ကျွန်ုပ်အပြစ်ပေးခြင်းပေတည်း… အသင်သည် ကျွန်ုပ်အပင်အောက်တွင် ရှုးရှုးပေါက်သဖြင့် ၀က်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်…ဆင်ခြင်လော့…. ပြန်တောင်းပန်လျှင် သက်သာမည်…
ရွာကိုစောင့်ချင်ရင်တော့.. ဒီထဲ.. လမ်းချော်နေသူတွေကို တည့်မတ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်…
ရွာသူားတွေထဲ.. အကောင်းဆုံး.. စာရင်း လစဉ်လုပ်ပေးရမှာပဲ..
ဒီအတိုင်း ဘာမှမလုပ်ပဲ.. ရွာစောင့်နတ်ပျင်းဆိုရင်တော့.. အရက်ထဲ.. ရေရောတိုက်ပြီး.. ရွာစောင့်မူလီလုပ်ပစ်မယ်..။
အကျနုပ်သည်ကား ရွာစောင့် ဒလဝမ် တည်း
သူကြီး ကျုပ်ကရွာစောင့်နတ်ပါ၊ သဂျီးမိန်းမ မီးဖွားဒုန်းက ကျုပ်မွေးပေးထားတာ မေ့လေရော့သလား၊ အဲဒီကျေးဇူးကိုမှမထောက် ကျုပ်ကို စာရင်းစစ်ပါလုပ်ခိုင်းရသလား၊ ရွာစောင့်မူလီလုပ်ရင် သူကြီးလဲ မချန်ဘူး ပြန်ကိုင်မှာဘဲ
စာကြွင်း၊ ၊ ရွာစောင့်နတ် မွေးပေးထားတဲ့ကလေးကို ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပါ
ဘလူးလေဘယ်မတိုက် ကေအက်ဖ်စီကြက်ကြော်မဆက်ဘဲ နတ်ပျင်းဖြစ်နေရင် ထန်းရေနဲ့ဝက်သားသာ
ဆက်လိုက်ပေတော့ဗျာ…… ရွာစောင့်နတ်ကို တဖြည်းဖြည်းလူဟောင်းကနောက်မန်ဘာဖွင့်သလားတောင်
သံသယဖြစ်လာပြီ အကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်သင့်အား စစ်မေးရန်လာမည်………
လူကြမ်းရင်နတ်ကြမ်းမခံနိုင်ဆိုသလို နတ်ကကျွန်ုပ်အားမကိုင်ခင် နတ်ကိုကျွန်ုပ်ကပြုတ်အောင်ကိုင်တော့
ပုံ………. နောက်တီးနောက်တောက်ဂိုဏ်းသား…… ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် …..
နာမည်ကိုခေါ်ချင်ရင်ရေတစ်ခွက်ဆောင် နာမည်ခေါ်ပြီးရင်ရေသောက် တစ်ပါတ်တစ်ခါနှလုံးအထူးကု၊အဆုတ်အထူးကုနဲ့ပြပါလေ……….
တခြားတော့ မကြောက်ဘူး …
နတ် “ကိုင်” မှာကြောက်တယ် .. ရွာစောင့်နတ်က “ ကိုင်”တတ်ပါသလား ..
မှော်ဆရာဆိုတော့ .. ရွာသူ ကိုင်မှာတော့ မကြောက်တတ်ပါ ..
ဒီမှော်ဆရာလဲခေသူတော့မဟုတ်ပေဘူး၊ နတ်ကိုတောင် ပြန်စော်ကားချင်သေးတယ် ဟွန်း၊ ကျုပ်က အထီးတော့ သိပ်မကိုင်တတ်ဘူး၊ အဟီး၊ ရွာစောင့်နတ်က စောင်မကြည့်ရှုချင်တာ ရွာသူအချောပဂေးလေးတွေကိုပဲ ဟီးဟီးဟီး ငှီးငှီးငှီး ရွာစောင့်နတ် စိတ်ဖောက်ပြန်ချင်လာပီ
သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ရွာတော်ရှင်ဆိုတာ ဥစ္စာစောင့်….
မိုက်မဲလှတဲ့ FattyCat သင်က သေချာကြည့်တော့ နေကြာစိလိုလို ဘာလိုလို လို့ပြောချင်တာလား…. အသင်တော့ အကိုင်ခံရပေဦးမယ်
ညည်း အဲလို ပူချော်လို့ကတော့
သည်းကို ခိုက်သွားလိမ့်မယ် ….
ပီး ရွာစောင့်နတ်ကြီး သူ့အပင်မှာ သူမနေဘဲ ..
ညည်းခြင်ထောင်ထဲမှာပဲ ဘုံဗိမ္မာန် ပြောင်းရွှေ့လာလိမ့်မယ် …
ဒီပူဇော်ပုံ ပူဇော်နည်းက အလန်းသားလား၊ ရွာစောင့်နတ် ခိုက်သွားဘီ၊ အံစာဒုံး ပြောသလို သင့်ခြင်ထောင်ထဲသို့ ဗိမာန်ပြောင်းနေဦးမှ ရွာစောင့်နတ်မှ ပျော်သွားသဖြင့် သင့်အား မန်းကျီးသီး နှစ်တောင့်ပေးလိုက်သည်၊ ထိုမန်ကျည်းသီးအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလေ၊ ဟင်းချက်ရာတွင် သုံးနိုင်သည်
ငါကားမန္တလေးမြို့ကိုစောင့်တဲ့ နတ် မြို့စောင့်နတ်တဲ့ကွ ရွာတော်ရှင်ဘွားတော်ကြီးရဲ့ဆရာဟဲ့….မသိရင်မှတ်ထား…..
စောင့်ချင်ရင် ရွာထပ်က အိမ်သာကျွင်းစောင့်တဲ့နတ်လုပ်
ညည်းဟာညည်းအဲဒီမှာစောင့်နေရတာကို အရင်ကပီတီဖြာနေပြီးတော့ အခုမှလာမွှေမနေနဲ့
ကျုပ်ဟာကျုပ် မြို့ထဲပဲနေနေ..မြို့ပြင်ပဲနေနေ ညည်းအပူလည်းမပါဘူး….ညည်းကဘာမှလူပါးလာဝမနေနဲ့…
ွှညည်းဟာညည်းအပြင်မှာအိမ်သာစောင့်ပြီး အီးစားနေရတဲ့ဟာကို လာပြီးလုံးချင်သေးတယ်..
ညည်းဘုံကိုကျုပ်မလုပါဘူး စိတ်ချပါ..ညည်းဟာညည်းတုံးတုံးလေးတွေဝအောင်စားပြီး မှပဲ
ရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါ…..ညည်းစားကျက်ကိုကျုပ်လုပါဘူးအေ….ငါကလဲစောင့်ချင်လို့စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးကွ အထက်ကအမိန့်အရလာလာပြီးcheck in ၀င်လုပ်လုပ်နေရတာ….
ဘယ်က ဂလုံပလုံးက ထွက်လာတာလဲမသိပါဘူး
သွား လမ်းထိပ်က မြောင်းပုတ်ရေနဲ့ ပါးစပ်ဆေးလိုက်အုန်း
sorry *1000000000000000000 မင်းအတုံးစားတာတွေရော မြောင်းပုပ်ရေသောက် တာတွေရော….ပြောရင်းတောင်မှ မင်းကိုရွံတယ်..ကွာ .ထွီး
ဖရဲတုံးနှင့် သစ္စာလင်း ရွာထဲမှာ ဒီလိုမျိုးတွေ မပြောကြပါလင့်၊ ကျွန်ုပ်ရွာစောင့်နတ်ရဲ့ ဗိမာန်ပူသကွဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ထိကပါး ရိကပါး မပြောကြပါလင့်၊ ကျွန်ုပ် သူကြီးကို မျက်နှာပူမိတယ်၊ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို ကျွန်ုပ်ကိုင်မယ်၊ လာထား၊
သတုံးကောင်ဖြဲမရေ…ညည်းကော ဘယ်လိုဥကနေပေါက်ခဲ့တာလဲလို့ ကိုယ့်ဟာကိုပြန်စမ်းစစ်အုံး
ကိုယ်က်ိုတိုင်တောင်အဆုံးအမရှိရှိနေခဲ့ရဲ့လားဆိုတာ…….ဒါပေမဲ့ညည်းပုံစံကြည့်ပြီးခန့်မှန်း လို့ 
ညည်းဓါတ်တွေကူးသွားဦးမယ်..ညည်းကတုံးစားပြီး ပုပ်ရေသောက်တဲ့သူဆိုတဲ့..ညည်းဘယ် ဥကပေါက်ခဲ့လဲ ကျုပ်ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်…..ညည်းလိုကျုပ်မကိုက်တတ်ဘူးနော်…..
သားတော်ဖရဲတုံး အဲလိုမပြောရဘူးလေကွယ့်၊ သူကြီးက ကျုပ်ကို တာဝန်ပေးထားတဲ့အတွက် လမ်းမှန်ကိုပြသရပေဦးမည်၊ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပါစေကွယ်၊ သဘောထားကြီးပေးလိုက်ပါ၊ သားတော်လေး ဆင်ခြင်လော့၊ သုံးသပ်လော့
ဟေ့ရောင် online ကနေ စိန်ခေါ်မနေနဲ့
အရိကျ ပြီး ငိုင်သလေလေ့
လေရူး မွှေတာ ကြုံရပြီ။
နတ်ရူး ဇာတ်ရူး အစုံအစုံ
ဟဲ့ တောင်မ ရွာစောင့်နတ် နင့်သစ်ပင်အောက်မှာ ဘိန်းစားတစ်ကောင်စောင့်နေတယ်…အဲ့ပုံပြင်ကိုသိတယ်မှတ်လား….:P
အားပါးပါး ဘီလိုဒွေ ဖစ်ကြတာပါလိမ့်။
နာ အိပ်ပျော်သွားတုန်း မို့ မသိလိုက်ရဘူးစ်။
ညသန်းခေါင် ကျရင် လား ၊
နာက သန်းခေါင်ကျရင် တရဲကြောက်လို့ စောင်ခြုံကွေးနေရတာ၊
ဒါလဲလေ အသေးစိတ်ဆိုရင်တော့ ကျလိ ကျလိ..ကျလိ။
သူကြီးရေ.. လုပ်ပါဦး.။ ရွာစောင့် နတ်တဲ့။ ကျွန်တော်က နတ်ဆိုရင် အကိုင်ခံရမှာ အရမ်းကြောက်တာ ။
နတ်ကိုင်ရင် ယား ကျိကျိ နေမှာလေ ။ အဟိ ။
ရွာစောင့်နတ်ကြီး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်း…. ဘေးမသီ ရန်မခအောင် စောင်ကို ..မ ကြည့်ရှု..အဲလေ………… စောင်မကြည့်ရှုတော်မူပါ.။
ရွာစောင့်နတ် ကြီး ကို ကျွန်မ အရီးလတ် မှ ဆလု ရိုက်သွားပါတယ်။
အဓိက ကတော့ မီးပျက်သော ညများမှာ ရွာစောင့်နတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ သုံးပြီး ရွာမှလူများကို အလင်းပေးပါလော့ ဟု ရိုသေစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ် ရွာစောင့်နတ်ကြီးရှင့်။
အရီးလတ်ရေ… လိုအပ်လွန်းနေတဲ့ဆုတောင်းပဲ.နော် ။
ကျွန်တော်လည်း..အလင်းတွေ နဲ့ ဆက်ပေးချင်လို့ ဆိုပြီး…အလင်းဆက် လို့ကလောင်နာမည် ပေးထားပေမယ့်…နိုင်ငံင်္ကြီး..မီးတွေ..ပျက်..မျောင်နေတာကို ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
အနုပညာ ဆိုတဲ့ အလင်းကလေးနဲ့ ပဲ…ဆက်ပေးရတော့မယ် ။
ရွာစောင့်နတ်ကတော့ လုပ်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါ့။
မူလီကြပ်ရတဲ့ နတ်ဆိုရင်တောင် အသုံးတဲ့သေး…၊
အခု နတ်က ဘယ်နေရာ သွားသုံးမို့လဲ…။
စောင့်ချင်ရင်လဲ ရွာ ပြင်ကစောင့်လေ….။
ဒီရွာကို ဝင်ရခက်မှာ.. တံခါးစောင့်ဂျီးလဲ ရှိနေလို့….။
သတိ !!နတ်ကြီးသည် ဂွ ကြီးကြီး နှင့်ကြပ် ပါ..
အသင် ရွာစောင်.နတ် ..
ဒီရွာထဲ မှာ မာဃလဲရှိရဲ. ၊ ၇ွာတော်ရှင်လည်းရှိရဲ. ၊မှော်ဆရာလည်းရှိရဲ.
သင်.ထံရောက်သောလဘ်လာဘများအား ထိုသူများအားအရင်တင်မြှောက်ပါလေ ။
( ရဟီးဆပ်မားသလူး )
ဟေ့ ရွာစောင့်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးပါဟ
ခေတ်ပြောင်းပြီး ဘုံပျောက်လို့ ဂဇက်ထဲနေစရာလာချောင်းသပေါ့ ဟုတ်စ၊နင်ခြင်္သေ့ မဆောင်တတ်ခဲ့ဘူး မှတ်တယ်။
သူကြီး၊ကြောင်ဂျီး၊ဘုဘုဂျီးနဲ့ ပေါက်ဖေါ်ဂျီးတို့ ထံချည်းကပ် ၊ နည်းနိသယ မှတ်၊ဒါမှ ဂဇတ် အရေလည်မှာ
ကောင်းပါလေ့ဗျာ – ဂဇက် ဆိုဒါ အရက် မရွေး(ေ၈ျာ်နီ၊ချီးဘတ်၊ဟန်နက်စီ၊ဘော်လကာ) အဲ အဲ–ယောင် တွားဘီ — ၊ လူမျိုးမရွေး၊အရောင်မရွေး၊ ၀ါဒမရွေး၊ အတွေးခေါ်စုံလင် မြင်သမျှပြော၊ဟုတ်သမျှဆို၊အားမနာ
လျှာမကျိုး၊ ဘယ်လိုလူမျိုး ဖစ်ဖစ် စမ်းသပ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာ၊လွဲလျှင် ၊၀ိုင်းတည့် ဆိုင်ချက် ညီမှ လက်ကျ သည့်နေရာ ၊မင်္ဂလာဘာလို့ ကြိုဆိုသဗျာ။
ရွားသားတွေ ပါးရိုက်မယ်၊ နားကိုယ်မယ်တွေ ဖြစ်နေပါလား ဟရို့ :LOL:
အကျနုပ် ငတာတီး အမှန်ဖြီးရရင်တော့
ရွာစောင့်နတ် ဆိုသူကား အယူလင် ဖြစ်မည်မှာ မှန်၏။
ဒီရွာအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းမက အိပ်သွန်ဖါမှောက် သိသူဖြစ်ပေတော့၏။
အယူလင် သည် အယူးလင် လည်းမဟုတ်
အယင်လူ ဟု ဆိုလိုပါ၏။